Getaways Europe - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 4)
Ibhishi lasePenarronda e-Asturias
Ibhishi lasePenarronda lise-Asturias, futhi liyindawo enkulu enesihlabathi enendawo enhle ezungezile nayo yonke imisebenzi oyisebenzisayo yosuku.
I-Rheilfford Talyllyn, isitimela esithutha iWales
Isitimela iRheilfford Talyllyn singesinye sezitimela ezincanyana ezihamba eWales
ICala Sa Tortuga eLloret de Mar
ICala Sa Tortuga yindawo encane efihlekile eLloret de Mar.
Amapaki amanzi amahle kakhulu ogwini lwaseSpain
Ihlobo liza futhi nalo, amazinga okushisa aphezulu. Sethula amanye amapaki wamanzi athandwa kakhulu eBenidorm, eCanary Islands noma eCatalonia.
UQuinta da Regaleira, isigodlo se-Portuguese esizimele eSintra
Kutholakale eduze nesikhungo esinomlando sedolobha laseSintra (ePortugal) yiQuinta da Regaleira.
IHouska Castle neSango lesihogo
Inganekwane ithi eHouska Castle kunomnyango oya esihogweni
Amabhishi aseSpain athule kakhulu ehlobo
Amabhishi athule kakhulu aseSpain ehlobo: thola okulandelayo ngamaholide akho ohlwini.
IKuddelfleck, isidlo sikazwelonke saseLuxembourg
Umzila omuhle we-NC500 odlula eScotland
Umzila odumile 66 ohamba e-United States usuka ogwini uye ogwini unombhalo ofanayo eScotland: umgwaqo omkhulu obabazekayo ...
IGolden Sands, ibhishi elihle kakhulu eBulgaria
IGolden Sands ingenye yezindawo zokungcebeleka ezinkulu kakhulu ogwini lwaseBulgaria oLwandle Olumnyama
Imininingwane emabhishi e-Blue Flag (II)
Namuhla sikushiya imininingwane eminingi ngamabhishi weBlue Flag (II). Siphinde sikhombise okunye kwalabo abathi ngo-2015 bathola leli fulegi.
Ehlobo 2015, amabhishi amahle kakhulu eMontenegro
Ngemuva kokuwa koDonga lwaseBerlin nokwakhiwa kabusha kweMpumalanga Yurophu, kwavela izindawo ezintsha ebalazweni ...
Khonzela iLanga eZadar, eCroatia
On the Zadar promenade kunomsebenzi wokuqala womakhi wendawo uNikola Basic: Sanibonani iLanga, noma i- "Greeting to the Sun."
ICantavieja, idolobha eliyingqophamlando empumalanga yeTeruel
ICantavieja iyikhaya legugu elimangalisayo nelokwakha phakathi kwemigwaqo nezakhiwo zalo.
Inqaba yaseGraça ePortugal
INqaba yaseGraça, eduzane nedolobha lasePutukezi i-Elvas, yakhelwa ukuvikela imingcele yezwe engcupheni yaphakade yokuhlaselwa omakhelwane bayo baseSpain abanamandla.
Amabhishi weTroia Peninsula, ePortugal
Emaphethelweni eLisbon kunenhlonhlo yaseTroia enamabhishi amahle namakhilomitha amaningi
Ukunambitheka kukaKhisimusi eWarsaw
EWarsaw, inhlokodolobha yasePoland, uzothola ukunambitheka nomlingo kaKhisimusi oyiqiniso.
ICitadel yaseJaca, itshe lesikhumbuzo elikhulu kunawo wonke edolobheni lase-Aragonese
Akungabazeki ukuthi itshe lesikhumbuzo elikhulu kunawo wonke eJaca, iCitadel yalo edumile, laziwa kwaze kwaba ngekhulu le-XNUMX njenge- “Castillo de San Pedro”.
IGrimselpasspass, intaba ebabazekayo eSwitzerland
IGrimselpass iyindawo yokudlula izintaba ebabazekayo eSwitzerland futhi mhlawumbe kuso sonke isifunda sase-Alpine
Ibhishi laseRimini, indawo enesihlabathi yobumnandi
Ibhishi laseRimini lingenye yezindawo zasehlobo ezidume kakhulu e-Italy. Kuyinto ebhishi egcwele ubumnandi.
Indlu yesibani seTourlitis e-Andros
iTourlitis Lighthouse ingomunye wabaqaphi basolwandle abahle kakhulu oLwandle i-Aegean eGrisi
IValle de Bohí, indawo enokuningi ongakuthola eLleida
IValle de Bohí ingumasipala ongaphakathi kwesifunda i-Alta Ribagorza (Lleida).
IMozartkugeln, amabhola eshokholethi aseSalzburg
IMozartkugeln, noma i- "Mozart balls" yizibiliboco ezidume kakhulu eSalzburg kanye nesikhumbuzo esiyinhloko sedolobha
Ngaphansi kweCatalan Pyrenees kunechibi elikhulu kunawo wonke eSpain naseNhlonhlweni Yase-Iberia: iBanyoles
Uphawu lwenhlanhla lukaFlorence yisithombe esincane sethusi esibizwa nge-Il Porcellino
IToledo, idolobha elikhazimulayo lamasiko amathathu
Isendaweni ephakeme ezungeze uMfula iTagus idolobha eliyingqophamlando laseToledo.
IJurassic Coast, lapho kwaqoshwa khona uchungechunge lweBroadchurch
Uchungechunge lwe-Broadchurch TV lwadutshulwa endaweni ebizwa ngokuthi yiJurassic Coast esifundeni saseDorset, eningizimu yeNgilandi.
IPlitvice Lakes, enye yezindawo ezinhle kakhulu eYurophu
ICroatia inamapaki emvelo ayisishiyagalombili kepha amaPlitvice Lakes avelele ngaphezu kwawo wonke umhlaba wawo onamachibi nezimpophoma ezinamanzi aluhlaza.
Ibhishi iTropea e-Italy
ITropea Beach itholakala oGwini lweCalabrian, e-Italy, futhi iyindawo enhle kakhulu.
Ukuthola iPlaza de España eSeville
Uma uvakashela iSeville, awukwazi ukushiya idolobha ngaphandle kokuchitha isikhathi ePlaza de España elungisiwe
ISørvágsvatn, ichibi elimangalisayo elixegayo leziQhingi zaseFaroe
IChibi iSørvágsvatn eziqhingini zaseFaroe, elinikeza isihambi ukubonakala kwechibi elikhulu elingenamkhawulo.
Ukuvakasha okuthakazelisayo nasezindaweni ezizungeze iCopenhagen
Uhambo oluzungeze iCopenhagen, into elula kakhulu ukuyenza ngenxa yenethiwekhi yalo yezokuthutha yedolobha esheshayo
I-White Rose Memorial eMunich
EMunich kunesikhumbuzo esinesizotha esivame ukunganakwa cishe yizo zonke izivakashi: i-Weiße Rose (i-White Rose).
IVelsen / Bloemendaal, ibhishi labasondelene kakhulu e-Amsterdam
IVelsen / Bloemendaal ibhishi labasondelene kakhulu e-Amsterdam. Le ndawo, eyabiwe phakathi kwabo bobabili omasipala, iqhele ngemizuzu engama-45 ngemoto.
Bheka ama-limes, umngcele wasendulo waseRoma eJalimane
I-Limes romanus ingumngcele wangaphambili woMbuso WaseRoma eJalimane
IMallorca, enye yezindawo ezivelele kakhulu zabavakashi eYurophu
Kutholwe ngasogwini lweSpanish Levante, enkabeni yoLwandle iMedithera, isiqhingi saseMallorca sivezwa njenge ...
ICosta Smeralda, indawo ekhethiwe yezokuvakasha zikanokusho eSardinia
I-Emerald Coast ibizwa ngokuthi umugqa osogwini lwesifunda saseSardinian iGallura, esifundazweni sase-Olbia-Tempio.
Artic Resort Kakslautten, igloos eLapland
Amathuna asePére Lachaise angenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eParis, ngoba abalingiswa abangcwatshwe lapho bayimbangi yodumo nabadumile abaphumula ePantheon uqobo. Omunye walaba balingisi imbongi nomlobi odumile wase-Ireland wekhulu le-XNUMX u-Oscar Wilde. Futhi ithuna lakhe likufanele ukuvakashelwa.
IBlue Lagoon, i-spa e-Iceland
IBlue Lagoon, ezokuvakasha ezishisayo e-Iceland
Uhambo 'Oluyimfihlo Lokuphila KukaWalter Mitty' e-Iceland
Inkampani yezokuvakasha inikela ngamaphakeji eholide e-Iceland asuselwa ku-movie ethi 'The Secret Life of Walter Mitty'.
Amapaki ama-nudist e-Englischer Garten eMunich
Elinye lamazwe emhlabeni lapho umkhuba wobunqunu usabalele futhi wamukelwa kakhulu yiJalimane. Lapho bakubiza ngeFreikörperkultur (FKK), "isiko lomzimba okhululekile". Kangangokuthi, njengoba manje isimo sezulu esihle sisondela, iMunich inezikhala eziyisithupha eziluhlaza ngaphakathi kwendawo yayo yasemadolobheni yama-nudists.
Ibhishi laseRibersborg, ubunqunu nokuphumula enhliziyweni kaMalmö
IRibersborg Beach itholakala nje imizuzu eyi-XNUMX ngebhayisikili elisuka enhliziyweni yeMalmö futhi inokunikezwa okubandakanya indawo yama-nudist nendawo yokugezela.
UPuglia, isithende sebhuthi lase-Italy
Ngakwesokudla esithendeni salelo butho elikhulu lokucabanga elichaza ukuma kwezwe lase-Italy ngesinye sezifunda ezinhle kakhulu kodwa ezingaziwa kakhulu ezweni: iLa Puglia. Lapha sizothola amabhishi amakhulu anesizungu, amadolobhana asezikhathini zasendulo apendwe okumhlophe namasiko amadala njengoba emangalisa.
Vakashela iStockholm ngebhayisikili (amathiphu wabathandi bamasondo amabili)
IStockholm idolobha elifanele ukuvakashelwa ngebhayisikili. Ngaphezu kwalokho, kuyo sizothola amaphuzu amaningi lapho siqasha khona eyodwa.
Izimpophoma ezidumile zaseNorway
Lesi sikhathi sizovakashela izimpophoma ezidumile eNorway. Ake siqale ngokusho iDe Syv Søstrene noma i-Waterfall ...
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthola iBirmingham ukuhamba ngesikebhe ngemigudu yayo yakudala. Futhi ukuthi isikhungo esiyingqophamlando saleli dolobha laseNgilandi siwela ngamakhulu ale migwaqo yamanzi kwesinye isikhathi ebibambe iqhaza elibalulekile njengemizila yezokuthutha yezinto ezisindayo ngesikhathi seNguquko Yezimboni, lapho bekhuluma idolobha nabanye abantu eNtshonalanga Midlands.
Amber, isikhumbuzo esivela ePrague
Kunezinto eziningi ezijwayelekile esingazithenga njengezikhumbuzo zohambo lwethu lokuya ePrague: ingilazi ebucayi yaseBohemia, onodoli bakudala bokhuni, ibhodlela leBecherovka yendabuko ... Kodwa-ke, uma ufuna isikhumbuzo esikhethekile futhi esihle, yini kufanele uthenge igugu elithile elenziwe nge-amber.
Inhlonhlo yaseHel ePoland
ULwandle iBaltic lunamachashaza amangalisayo. Esinye sazo iHel Peninsula, enyakatho-mpumalanga yePoland, phambi kwetheku laseGdansk. Yindawo ende yesihlabathi esingamakhilomitha angama-35 ubude egudle ulwandle futhi ixhunywe nezwekazi yiWladyslawowo Isthmus.
ICala Salada neCala Saladeta ngamabhishi amabili e-Ibiza asondelene kakhulu, kepha anezithameli ezichazwe kahle: ngakolunye uhlangothi, iCala Salada yiyona ethandwa kakhulu, kanti kolunye iCala Saladeta lisondelene kakhulu futhi limangele.
IHalloween 2013: Izitolo Zokugqoka Eziphezulu Ezi-XNUMX zaseLondon
ILondon inezinye zezitolo ezinhle kakhulu emhlabeni zokuthenga imvunulo ye-Halloween.
Izinsalela ezingenakulinganiswa zaseRoma lasendulo
Namuhla sikhuluma ngezinye zezinsalela ezinkulu zoMbuso WaseRoma
Amathuna amathuna amakhulu kunawo wonke emhlabeni, e-Odessa
Namuhla sihambela idolobha lase-Odessa, e-Ukraine, osebeni loLwandle Olumnyama, kukhona umhlaba othakazelisayo ongaphansi komhlaba, lowo wohlelo olukhulu kakhulu lwamaphephabhuku noma amathuna okugcwala emhlabeni. Cishe amakhilomitha angama-2.500 XNUMX (ubude bawo bangempela abaziwa ngokuqiniseka) kwemigudu embe etsheni lekalika. Uma lemihubhe yakha umugqa oqondile ukusuka edolobheni uye entshonalanga, yayizofika eSpain!
Izakhiwo ezimbili zesimanje zaseMunich
Namuhla sikhuluma ngeBMW Welt neMunich Olympic Park, izakhiwo ezimbili zesimanje
Proizd, ipharadesi elincane eCroatia
Isiqhingi saseProizd, enkabeni yoGu lwaseDalmatia, sithandana nabavakashi ngamabhishi aso anamanzi acwebezelayo nemvelo engonakalisiwe.
I-Aqualand, ipaki lamanzi elimnandi eCosta Adeje
I-Aqualand Aquapark ingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuzijabulisa nezokuzijabulisa zomndeni wonke eTenerife.
Kilt, umkhiqizo wendabuko waseScotland ongafanele wonke umuntu
IKilt ngomunye wemikhiqizo yendabuko, hhayi kuphela evela eGlasgow kepha evela kulo lonke elaseScotland, yize ingumkhiqizo ongafanele wonke umuntu.
ITuraida, enye yezinqaba zasendulo zaseLatvia
Inqaba yaseTuraida, imnyuziyamu kanye nesiqiwi semvelo eduze neRiga eLatvia
Indlu iVan Eetvelde, eBrussels
Namuhla sikhuluma ngeVan Eetvelde House, eyakhiwe nguVictor Horta futhi yafakwa ngaphakathi kwenhlangano ye-Art Nouveau
I-Titan Crane, enye yama-cranes amakhulu kunawo wonke emhlabeni
Eduze kakhulu neGlasgow, eClydebank, kuneTitan Crane noma iTitan Crane, engenye enkulu kunazo zonke emhlabeni.
IBinibeca, idolobha elincane elimhlophe elikhazimulayo eMenorca
IBinibeca yidolobha elincane elicishe libe amakhilomitha ayishumi ukusuka edolobheni laseMahon, esiqhingini saseMenorca (Balearic Islands, Spain).
I-Pico de las Nieves: uhambo lokuya engqungqutheleni ephakeme kakhulu yeGran Canaria
IPico de las Nieves, enamamitha ayi-1.949, ibonakala iyindawo ephakeme kakhulu eGran Canaria.
I-West Highland Line, isitimela esihle kunazo zonke eScotland
Uma ufuna ukuthola futhi ujabulele izindawo ezinhle kakhulu zaseScotland ohambweni lwesitimela, unganqikazi ukuthenga amathikithi akho okugibela amakalishi eWest Highland Line, okunikeza uhambo oluhle phakathi kweFort William neMallaig, enkabeni ye Amazwe aphezulu.
Ibhishi elihle leScala dei Turchi eSicily
IScala dei Turchi, "isitebhisi sabaseTurkey". Leli yigama lokuthi yini kwabaningi olwandle oluheha kakhulu eSicily. Igama lichazwe kahle lapho silivakashela: amadwala abonakala edweba isitebhisi futhi empeleni lokho bekungukusetshenziswa okunikezwe yizigebengu zaseTurkey eziphanga ogwini lwalesi siqhingi ngekhulu le-XNUMX.
Amabhishi amahle kakhulu eGalician
Kusukela eziQhingini zaseCíes kuya esiQhingini sase-Ons, iGalicia inamabhishi angenalutho lokufela lawo aseCaribbean, athola amabhishi ashibhile apharadesi
IFlensburg, idolobha laseJalimane elinomphefumulo waseDenmark
Ngasenyakatho yesifundazwe saseSchleswig-Holstein, isifunda esisenyakatho kakhulu eJalimane, kunedolobha elihle laseFlensburg, ezansi nomfula iBaltic. Idolobha laseJalimane kodwa elinomphefumulo waseDenmark. Eqinisweni, umngcele neDenmark uqhele ngamakhilomitha ambalwa nje kuphela futhi emigwaqweni yawo ulimi namasiko aleli zwe laseScandinavia akhona yonke indawo.
IBhuloho likaKromlau likaDeveli nombuthano walo ophelele
Idolobha laseJalimane iKromlau likhaya lepaki elinokwakhiwa kwamatshe okwenziwa ngendlela eyingqayizivele yamaGothi, okwaziwa ngeDiabol's Bridge.
Umhume waseBisevo Blue, eCroatia
Uma uhambela olwandle lwaseDalmatia eCroatia, ngaphezu kwamabhishi amahle namadolobha amahle asogwini, uzothola ezinye izinto ezimangazayo zokwakheka kobuhle obedlulele. Enye yazo umhume oluhlaza okwesibhakabhaka waseBisevo. Ukuyithola akuyona umsebenzi olula kepha kufanelekile ukuqasha uhambo olusuka eSplit uye esiqhingini saseVis futhi uzethule ukuthola lesi simanga.
IMedjugorje, indawo engcwele yokuya eBosnia-Herzegovina
NjengoFatima ePortugal noma eLourdes eningizimu yeFrance, esifundeni saseBalkan kunendawo yokuhambela amaKhatholika azinikele emhlabeni: idolobha laseMedjugorje, eBosnia-Herzegovina, lapho amakholwa eqinisekisa khona ukuthi iNcasakazi uMariya yavela. izingane eziyisithupha zaseCroatia ngoJuni 24, 1981.
Amahhotela anconyiwe eBulgaria
Namuhla sizohlangana namanye amahhotela aphawuleka kakhulu eBulgaria. Ake siqale ukuvakasha kwethu e-DoubleTree ngo ...
Ngo-1910, kwakhiwa isithombe esikhulu endaweni ethile ogwini lwase-Italy iLigurian, eduze kwedolobha laseMonterosso. Kwakuyisibalo samamitha ayi-14 esiphakeme sikankulunkulu uNeptune ngesitayela sakudala esasizohlobisa umbono we-Villa Pastine. Ukuguguleka kolwandle namabhomu ahlangene eMpini Yezwe II kulimaze kakhulu iMonterosso Giant, okuthe yize konke kuhlala kungenye yezindawo ezikhangayo kule ndawo.
IMalta yizwe elenziwe ngeziqhingi, futhi elisenkabeni yoLwandle iMedithera, liyi ...
ICala Fonda, ibhishi laseHawaii eTarragona
ICala Fonda, eyaziwa kangcono ngokuthi iWaikiki, ibhishi laseTarragona elimangalisa ubuhle balo nokuzola kwalo.
UShell Grotto, umhume ongaqondakali wamaNgisi wamagobolondo
Eduzane nedolobha laseNgilandi iMargate, esifundeni saseKent, kunomhume ongaqondakali ohlotshiswe ngamagobolondo angaphezu kwezigidi ezi-4. Igama lalo yiShell Grotto futhi liyindawo yokuheha izivakashi ehlanganiswe nezimfihlakalo: akekho owaziyo ukuthi ngubani owakha, noma nini, noma ngayiphi injongo.
Ukuvakashela izimakethe eFrankfurt kuyinto edingekayo lapho uthenga kuleli dolobha.
Amanxiwa eThempeli laseMithras, ifa lamaRoma eLondon
Amanxiwa eThempeli laseMithras, Amanxiwa amaRoma, eLondon
NgoSepthemba wangonyaka odlule, isiteshi somphakathi saseSpain i-TVE saqala ukukhombisa u-'Isabel ', uchungechunge oluphumelele kakhulu olususelwa ku ...
Ungadla kuphi ama-frankfurters amahle kakhulu
IFrankfurt imangaza wonke umuntu ngoba ihlala inezinye izindlela ezingapheli zokudla, kungakhathalekile ukuthi uthanda ini kanye nephakethe lakho.
Ingolstadt Village: indawo enkulu yezitolo eningizimu yeJalimane
Enxanxatheleni yezitolo ebizwa nge-Ingolstadt Village ungathola izitolo ezingaphezu kwekhulu.
U-Eiserner Steg, ibhuloho lensimbi eFrankfurt
I-Eiserner Steg noma i-Iron Bridge, ingenye yezindawo esingenakuphuthelwa kuzo lapho sivakashele eFrankfurt, okuyindawo yakudala kwezokuvakasha.
IChatsworth House: isigodlo esikhulu sezwe emaphandleni amaNgisi
Esifundeni saseDerbyshire ngesinye sezithabathaba zomlando ezinkulu kunazo zonke eNgilandi: iNdlu yaseChatsworth.
I-Corset: Izingubo ezijwayelekile zaseFrance
Uma kufanele sikhulume ngenye yezingubo ezijwayelekile zaseFrance, kufanele sisho icala le ...
Umkhosi Wokukhulisa Umfazi eSoniajärvi
Edolobheni laseFinland iSoniajärvi, umkhosi Wife Rising ubanjwa minyaka yonke, umkhosi wonke ngesitayela seViking esimsulwa
Edolobheni laseBorgloon, eliqhele ngamakhilomitha angama-80 ukusuka eBrussels, kumi isonto elihluke kakhulu kunalezo esingazithola kulo lonke iBelgium. Imayelana nesonto elisobala. Cha, asikhulumi ngokusobala kweSonto LamaKatolika njengesikhungo, kodwa mayelana nesonto elisobala ngokoqobo, umsebenzi oyingqayizivele wabakhi baseBelgium uPieterjan Gijs no-Arnout Van Varenbergh.
I-Renaissance iphinde yaletha uguquko emkhakheni wokuhlelwa kwedolobha e-Italy. Lapho, kwasungulwa izinhlelo ezintsha zokuqinisa amadolobha ezazisabela entuthukweni yezempi yangaleso sikhathi, yehluke kakhulu kuleyo yezikhathi zasendulo. Ngakho-ke kwazalwa izindonga ezimise okwenkanyezi ezinama-bastion nama-engeli avaliwe njengalawo wedolobha lasePalmanova, ngaseVenice.
Ihhotela elidala kunawo wonke eYurophu, eFreiburg
Ibizwa ngeZum Roten Bären (iRed Bear) futhi yihhotela elidala kunawo wonke eYurophu. Kubekwe esakhiweni esidala esikhangayo enkabeni yeFreiburg, inhlokodolobha yeHlathi eliMnyama eJalimane. Yakhiwa ngo-1311, ngakho-ke inamava ayisikhombisa eminyaka. Kubhalwe njengehhotela lezinkanyezi ezi-4, abanikazi balo bakhetha ukulibiza ngokuthi "indlu yabahambi endala kunazo zonke eJalimane".
I-Tuscany (i-Italy): isifunda esinomlando ongenakuqhathaniswa nemvelo
ITuscany inelungelo lokuba namadolobha amaningi nemizi enobuhle obukhulu bemvelo kanye nefa elinothile lomlando namasiko.
Isifanekiso esihlekisayo sabaculi baseBremen Town
Wonke umuntu uyayazi le ndaba: imbongolo, inja, ikati neqhude kwakuzohlatshwa emapulazini abo ngenxa yokuthi sebekhulile futhi bengenamsebenzi, ngakho-ke babaleka bazimisela ukuhamba umhlaba wonke beziphilisa njengabaculi. Bangabaculi baseBremen Town (die Bremer Stadtmusikanten), abalingiswa abaqhamuka ezinganekwaneni ezithandwayo zeBrother Grimm, empeleni, abanesithombe sabo kuleli dolobha laseJalimane.
Izithombe ezimangalisayo zangaphandle zeGuggenheim eBilbao
Kuthiwa, nangaso sonke isizathu emhlabeni, ukuthi iGuggenheim Museum iguquke unomphela, futhi kwaba ngcono, ukubukeka kwedolobha laseBilbao kanye nomfula walo. Hhayi nje kuphela ngenxa yesisindo samasiko nokwakhiwa kwesibindi sokwakhiwa kwaso, kodwa futhi nangenxa yezithombe ezibaziwe ezimile ngaphandle. Ukuhamba okuhle okugcwele okumangazayo.
IRabbit Bay (e-Italy): thola ipharadesi laseMedithera eduze kwaseSicily
Isiqhingi saseLampedusa siseLwandle iMedithera, okuyisiqongo esisenyakatho neYurophu, ngoba siqhele ngamakhilomitha ayi-167 kuphela. emaphethelweni eTunisia.
I-Rhine Valley phakathi kwe-Mainz ne-Koblenz
Ekwindla iRhine river cruises inikela ngamathafa ajabulisayo ahlukile komunye unyaka: Imizana yaseRiesling, izinqaba kanye nezivini, ukusuka eKoblenz kuya eMainz, sithola uhlangothi lwendabuko nenhle kakhulu entshonalanga yeJalimane.
Amabhishi amahle kunawo wonke e-Italy
Faka kuhlu ngamabhishi amahlanu amahle kakhulu e-Italy.
Binigaus, ubunqunu eMenorca
Ibhishi labadali bemvelo laseBingaus, eMenorca, lisanda kukhethwa njengelinye lamazwe ahamba phambili kuyo yonke indawo yaseSpain.
IPortugal (Algarve): Amoreira, uvakashela amabhishi amahle kakhulu eCosta Vicentina
Ibhishi lase-Amoreira lihlukaniswe ngasenyakatho yidwala elikhulu ledwala elimnyama elifana nesigebenga eselulekile.
IPortugal (Algarve): I-Odeceixe, elinye lamabhishi athakazelisa kakhulu ogwini lwasePortugal
Njengamanje ibhishi lase-Odeceixe liphethe ifulegi eliyigugu eliluhlaza okwesibhakabhaka, eliqinisekisa ikhwalithi yemvelo yale ndawo kanye nezinsizakalo ezinikezwa izivakashi.
Ubusuku obupinki eRimini
Njalo ngoJulayi idolobha laseRimini kanye nalo lonke ugu lwe-Adriatic esifundeni saseRomgna e-Italy kuhlaselwa ngombala: opinki, okhanyisa izakhiwo ebusuku, ungcolisa imigwaqo nezikhumbuzo futhi ungene empilweni. izindlela eziyizinkulungwane. Yi-Notte Rosa (Ubusuku obuPinki), omunye wemicimbi emikhulu yemikhosi yasehlobo lase-Italy.
Amabhishi aseNudist aseMalaga
Uma uzohambela eMalaga futhi unentshisekelo kubunqunu, ungavakashela amanye amabhishi onqunu idolobha elinalo. Bazi ngaphambili.
IPassau (eJalimane): idolobha okumele laziwe eBavaria
Idolobha elidala lasePassau lihlanganisa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu kuleli dolobha, njengeCathedral, Residence kanye nezikwele ze-Town Hall.
IGrinzing, isifunda sesivini eVienna
Ukuhamba okufishane kutramu ethandekayo yaseViennese kusisa kwesinye sezindawo ezihlonishwa kakhulu enhlokodolobha yase-Austrian, sizungezwe amagquma ambozwe ngamahlathi nezivini: iGrinzing. Namuhla sekungomunye womakhelwane eVienna enkulu nenhle, kepha eminyakeni edlule bekuyidolobha elihle futhi leyo ntelezi endala ayikalahleka.
Uma uzobhaca ePortugal, akukubi ukuthi wazi ukuthi yimaphi amabhishi ahlaba umxhwele kakhulu ozokwazi ukuwathola kuleli nasemadolobheni.
Izindlu zophahla oluhlaza eNorway
Kungabukeka njengehlaya, kepha kuliqiniso: uphahla lotshani eNorway luyisiko, yize lungashukunyiswa ncamashi ukuqwashiswa kwemvelo, kepha ngezinzuzo zabo ezingokoqobo ngoba lamaphahla aluhlaza asiza ukuzinzisa indlu, ahlinzeka ngokugquma okuhle futhi amelana kakhulu.
IPortugal namabhishi ayo, indawo ehlobo
Phakathi kukaJuni noSepthemba ePortugal kusehlobo futhi kulapho izinkulungwane zezivakashi zivela ezifundeni ...
INafplio (Greece): elinye lamadolobha amahle kakhulu futhi athakazelisayo ePeloponnese
Uhambo oluya eGrisi lufanelwe ukuvakashelwa yiPeloponnese. Kule nhlonhlo kufanelekile ukuma ...
IWurzburg (eJalimane): izivakashi ezihamba phambili edolobheni laseBavaria
IBhuloho Elidala LaseWürzburg (i-Alte Mainbrücke), elakhiwe phakathi kuka-1473 no-1543, lalisebenza esikhundleni selaseRomanesque esasivele ...
Amaholide ehlobo emabhishi amahle kakhulu eLanzarote
ILanzarote, njengoba wazi kahle, iyisiqhingi sase-Atlantic esiyingxenye yeCanary Islands, eSpain. Uma kwenzeka…
I-ROTHENBURG (Germany): idolobha elincane lapho uKhisimusi ehlala khona unyaka wonke (I)
KumaJalimane, iRothenburg ob der Tauber yidolobha elincane eligcina idumela elihle, ngoba leli dolobha ...
Umzila Wezinqaba udlula eGuadalajara, eSpain
Uma uthanda izinqaba zakudala futhi uhlela ukuvakashela iSpain bese uvakashela isifunda saseCastilla-La Mancha njenge ...
Ukuphunyuka kwezothando kulo Khisimusi
Ucabanga ukujabulela ukubaleka kwezothando? Uma kunjalo, nginezindaba ezinhle kakhulu kuwe, ngoba ngalezi zinhlinzeko ...
Wells Cathedral, gothic eNgilandi
Uma kunesitayela sokwakha engikuthanda kakhulu, yiGothic. Bengingeke ngakhe indlu namuhla ...
Izinqaba eToscany, e-Italy
Siya esifundeni sase-Italy saseTuscany ukubona izinqaba ezinhle kakhulu esingazibona kuso
'I-Caminos' iqembu elehlukile lesithombe esivela eFuerteventura
Umjikelezo otholakala ngaphambi nje kogu lwaseGaviotas, enhlonhlweni yaseJandía (Fuerteventura) usube ...
Ukuvakashelwa Kwizinqaba ZaseSpain Ezibalulekile (Ingxenye 1)
Ukwenza inhlonipho enhle ezweni eliyinika igama layo, sithola iCastle of Loarre, ene ...
I-Exeter Cathedral eNgilandi
Saya edolobheni lase-Exeter, eningizimu-ntshonalanga yeNgilandi, siyovakashela isonto lombhishobhi walo, elinye lamahle kunawo wonke ezweni
I-Gyor, idolobha lezimbali laseHungary
Siya eHungary, eduze nomngcele weSlovakia, ukuvakashela nokwazi idolobha laseGyor, okungelesithathu ngobukhulu ezweni
Sihambela eningizimu ye-Estonia ukuyokwazi nokuvakashela iParnu, elinye lamadolobha ahambela kakhulu ezweni ngenxa yamabhishi alo
Amachibi aseBavaria eJalimane
Siya esifundeni saseBavaria, eMunich, ukubona amachibi aso amahle kakhulu, aseningizimu yedolobha laseJalimane
Amanye amadolobha amahle kakhulu eSpain
Ngabe uhlala eLatin America kepha ogogo nomkhulu bakho bavela eSpain ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX? Ufuna…
Leiden, i-Amsterdam encane eHolland
Siya eHolland ukuvakashela iLeiden, elinye lamadolobha amahle kakhulu ezweni, indawo yokuzalwa yaseRembrandt
IChisinau, ezokuvakasha enhlokodolobha yaseMoldova
Siya eMoldova siyovakashela iChisinau, inhloko-dolobha yayo, futhi sivakashele nokuvakasha kwayo okubalulekile
Amabhavu ashisayo eTuscany
Siya eTuscany, e-Italy, ukuyobona amanye amanzi okugeza ashisayo, alungele ezokuvakasha zokuphumula
Izindawo zabavakashi eLuxembourg
Siya eLuxembourg ukuze sazi izindawo zayo eziyinhloko zezivakashi
ICardona Castle, okuheha eCatalonia
Omunye wabomasipala baseCatalonia, eSpain, oyingxenye yesifundazwe saseBarcelona, ​​yiCardona. Le ndawo yaziwa ...
I-ALBARRACÍN (Teruel) (I) I-Albarracín yabaningi ingenye yamadolobha amahle kakhulu futhi amahle eSpain. Izizathu zalokhu ...
Amathumbu oMhlaba afihla esinye sezimo zemvelo ezehluke kakhulu eYurophu. Endaweni ye ...
Amabhishi amahle kakhulu eMalaga
Amabhishi aseMalaga anezinzuzo eziningi ngaphezu kokuba amabhishi amahle kakhulu. Inzuzo enkulu ukuthi bakwi ...
Indlu yezivakashi yaseGoldenes Schwert - iZurich
Le ndlu esebenza njengehhotela ingenye yezithandwa kakhulu emphakathini wezitabane ovakashela eZurich. I…
Amagumbi aseSpain: UValdés noNavia (IV)
Siyaqhubeka entshonalanga ye-Asturias futhi ngemuva kweValdés ukuphenduka kweNavia, umkhandlu othanda ...
Isigodlo sezindela saseDafni siseduze kakhulu nenhlokodolobha yaseGrisi, amakhilomitha ayi-11 enyakatho-ntshonalanga ye ...
I-Formentera (BALEARIC ISLANDS): Amabhishi amahle kakhulu esiqhingini (IV)
IFormentera inikeza indawo ekahle yokujabulela amabhishi ayo amahle azungezwe indawo yemvelo elondoloziwe. Emaphethelweni alo ...
Istria (CROATIA): Amabhishi amahle kakhulu empumalanga ye-Adriatic (III)
ICvrerni Otoc (Istria) Lolu lwandle liseduze nedolobha laseRovinj, futhi laziwa nangokuthi yi ...
Istria (CROATIA): Amabhishi amahle kakhulu empumalanga ye-Adriatic (II)
Istria iyisihlonhlo esibheke oLwandle i-Adriatic, esisogwini olusenyakatho yeCroatia, emngceleni we ...
IFethiye (ETURKEY): Amabhishi amahle kakhulu aseTurkey e-Aegean
Ukuhambela eTurkey kuhlale kucabanga ngedolobha lase-Istanbul, kepha leli zwe elihle linezindawo eziningi ongazijabulisa ngazo,…
Amabhishi aseGalicia, amahle njengalawo aseCaribbean
Ekupheleni kwekhulu le-XNUMX nangeshumi lokuqala leminyaka lekhulu lama-XNUMX, izakhamizi eziningi zaseSpain zathuthela eMelika ...
Ayisetshenziswa kakhulu ezokuvakasha, la mabhishi angenye yezindawo ezinhle futhi ezikhethekile e-Italy, atholakala ebangeni elingamakhilomitha ambalwa ...
Amathempeli nezikhumbuzo eJalimane
Ngalesi sikhathi sizoya eJalimane ukuyobona ezinye zezikhumbuzo zayo eziyizifanekiselo. Ake siqale umzila wethu enhlokodolobha ...
Amabhishi kanye nogu eBarcelona nase-Ibiza
Uma ungomunye walabo abathanda ukuya emabhishi, akukho okungcono kunokuvakashela ogwini lwaseMedithera. Ake siqale umzila wethu e ...
Ungazijwayeza kuphi i-nudism eSpain?
Ungathanda ukuphila i-adventure yemvelo ngokuphelele eSpain? Ake sazi amanye amabhishi aphawuleka kakhulu ezweni lama-nudist. Ake siqale ...
Ake sijabulele uhambo oluthokozisayo lokuvakasha kwamasiko eCantabria eSpain. Okokuqala kufanele sisho ukuthi iCantabria iyi ...
Amasiko namasiko eRussia
Njengoba wazi, izwe ngalinye lehlukile kolunye ngamasiko alo namasiko alo, inani labantu nabanye, kanye neRussia ...
Maphakathi neNhlonhlo Yase-Iberia ungathola uMfula iNervión ugudla yonke ingxenye esenyakatho yendawo yaseSpain ...
IPlatja d'es Pregons neWreck Beach: 2 amabhishi amahle kunawo wonke emhlabeni
Siyaqhubeka nokuhambahamba emhlabeni ukubona iFrance, eyaziwa njengebhishi lokuqala lama-nudist emhlabeni. Manje sekuyisikhathi sethu ...
IMedithera inezindawo eziningi zabavakashi lapho izinzwa zethu kufanele zazi futhi zijabule khona, futhi i-Italy ingenye ...
Isigodlo seHosios Lukas eGrisi
IGrisi ibonakala ngobuhle bendawo yayo nezindawo ezingenakubalwa zabavakashi enazo. Phakathi kwazo kukhona ...
Siqhubeka nohambo lwethu futhi sizohlala eYurophu, kulokhu sizohlangana nenye ye ...
I-Russia, umlando namagugu amasiko
I-Russia noma iRussian Federation yakhiwa iningi leMpumalanga Yurophu kanye nengxenye yeNyakatho ye-Asia Okukhulu kakhulu…
Imikhosi namasiko eBulgaria
isithombe sesikweletu: benkamorvan Ikhalenda le-Orthodox laseBulgaria licebile ngemikhosi. Imikhosi nemikhosi yemvelaphi yobuqaba ihlangana kuyo ...
isithombe sesikweletu: i-carlos_seo Igama elithi Sorbonne (ngesiFulentshi La Sorbonne) livame ukusetshenziselwa ukubhekisa eNyuvesi yase-…
Izikwele, imigwaqo nezindawo ezijwayelekile zaseNaples e-Italy
isithombe sesikweletu: seleniamorgillo Phakathi kwemigwaqo emikhulu enkabeni yeNaples yiVia Toledo, eminyakeni embalwa edlule ebizwa…
Amabhishi amahle kakhulu wokuzijwayeza "ongenalutho" (ingxenye 3)
Amabhishi azayo ayaziwa ngesitayela sabo kanye ne-hedonism. Imvelo yabo, kanye nentelezi yeparadesi ibenza ...
UPlckley, eNgilandi, idolobha eliyizipoki
Leli dolobhana elincane laseBrithani, elisendaweni yase-Assford eKent, seliphenduke usaziwayo phakathi ...
Kutholakala eCornwall, eningizimu-ntshonalanga yeNgilandi, iPort Isaac yidolobhana elincane lokudoba eselibe ...
INeuschwanstein castle, iBavaria, Germany. Ukulala indlu kaBeauty
Etholakala esifundeni saseJalimane iFuessen, eBavaria, iyalelwe ukuthi yakhiwe yiNkosi LouisII ngo-1866, ngamabili ...
Sisebenzisa amaholidi esesinawo, futhi uma isimo sezulu sihle, inketho enhle kakhulu ...
IKarlovy-Vary, idolobha le-spa ePrague
Ezokuvakasha eCzech Republic akuyona ukuphela kwento ePrague. Enyakatho yezwe, esifundeni saseBohemia ...
IMonaco, izwe lokunethezeka
Ngemuva kweVatican, iMonaco iyizwe lesibili elincane kunazo zonke emhlabeni, futhi okumangazayo ukuthi ngeyokuqala ngobuningi babantu….
Izinkawu, ugwayi notshwala eGibraltar
Kutholakala engxenyeni eseningizimu kakhulu yenhlonhlo, iGibraltar yidwala elinamadwala elisogwini olusenyakatho ...
Amabhishi ayishumi anqunu kakhulu emhlabeni
Amabhishi ayishumi amahle kunawo wonke emhlabeni, ngokusho kwe-GoNOMAD.com. Izinhlu zihlala zizithoba (iziphakamiso zamukelwa, yini eyakho ...
Isonto lapho kugujwa khona imisa yokuqala yamaKatolika
Inkolelo edumile ithi imisa lokuqala lamaKatolika lagubha eSanta Maria eTrastevere, eRoma. Leli bandla ...
Amahhovisi ezokuvakasha eLondon
ELondon Logue bashicilele uhlu olunamahhovisi ezivakashi ongaluthola eLondon. Iza kahle ...
Izindawo ezihamba phambili ze-ayisikhilimu eRoma
Ngolunye usuku ngiphawule ukuthi ngokwesiFulentshi, indawo yase-Berthillon ice cream eParis yiyona eyenza u-ayisikhilimu ohamba phambili emhlabeni. Kepha…
Ama-ayisikhilimu amahle kakhulu emhlabeni enziwa eBerthillon, eParis
Yebo, yilokho okushiwo yilabo abake bakuzama. Kimina u-ayisikhilimu omuhle kakhulu uzohlala ...
NgeBajoCoste.com ngithola ucezu lwezindaba ezifuna ukwazi: kubekwe ibalazwe elithengiswayo ku-eBay ukuthi ...
IAudioGuide inikeza imihlahlandlela yamahhala yomsindo emadolobheni amakhulu aseYurophu
Ukhathele ukuhlala uphethe umhlahlandlela wakho emsebenzini? Nge-iAudioguide ungalalela umhlahlandlela wakho womsindo ngenkathi unyakaza ...
Izindawo eziyi-11 okungafanele uziphuthe eRoma
IRoma, "Idolobha Laphakade", iyidolobha elikhulu elihle, eligcwele umlando nobuciko kuwo wonke amagumbi alo. Uma ufika…
ICambridge, elinye lamadolobha amahle kakhulu e-UK
Uma unesonto noma ngaphezulu ukuhambela eLondon, ngincoma ukuthi, ngaphezu kokuvakashela i-Oxford, idolobha ...